Lalàna Maha-be Adihevitra Any Bangladesy Manasongadina Ny Hasarotry Ny Fanambadian’ny Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2016 3:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, 繁體中文, عربي, 简体中文, বাংলা
Saika ny antsasaky ny mponina vehivavy any Bangladesy dia eo anelanelan'ny 20 sy 24 taona. Maro amin'izy ireny no nampanambadiana talohan'ny faha-18 taonany, taona ara-dalàna hnadehanana manambady. Sary avy amin'ny Flickr-n'i SAM Nasim. CC BY 2.0
Tamin'ny 24 Novambra 2016, nahazo fankatoavana tamin'ny kabinetra any Bangladesy ny Lalàna 2016 Mifehy Ny Fanambadian'ny Ankizy izay maha-be adihevitra. Manana tanjona hampihena ny tahan'ny fanambadian'ny ankizy any Bangladesy, helohin'ilay lalàna ny fanitsakitsahana ny taona ambany indrindra ho an'ny fanambadiana — 21 taona ho an'ny lehilahy ary 18 taona ho an'ny vehivavy — miaraka amin'ny onitra sy fanagadràna. Miovaova ny hamafin'ny sazy, miankina amin'ny toerana tazonin'ilay olona ao anatin'ilay fanambadiana.
Na izany aza, ahitana andininy vaovao ilay lalàna, milaza fa aminà “tranga manokana”, toy ny fitondrana vohoka, mahazo alalana ny zazavavy hanambady miaraka amin'ny fankatoavan'ny ray aman-dreniny sy didim-pitsarana mba “hiarovana ny voninahiny”.
Maro ireo adihevitra mitranga ao amin'ny firenena momba ity tranga manokana ity. Atahorana hanome vahana ny fanolanana sy handrisika ny fampanambadiana ny ankizy izany.
Olana maneran-tany mahakasika zazavavy 15 tapitrisa isan-taona ny fanambadian'ny ankizy. Ao anatin'ireo firenena 20 izay manao ny fanambadian'ny ankizy ho fenitra i Bangladesy, na misy aza ny lalàna manohitra izany. Vao folo taona lasa monja izay, vehivavy maro, indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra, no nampanambadiana talohan'ny nahatratraran'izy ireo ny faha-18 taonany.
Mihena izany fironana izany ankehitriny noho i Bangladesh nanao ezaka lehibe amin'ny fanatratrarana ny fiovian'ny lahy sy ny vavy. Ny antony sasany manosika ny fanambadian'ny ankizy dia ny fahantrana, faniriana te-hiaro ny zazavavy, ary ny tsy fahampian'ny fanabeazana manome fahavitan-tena. Ny zazavavy iharan'ny fampanambadiana aloha loatra dia miaritra oalana ara-pahasalamàna ary iharan'ny herisetra an-tokantrano.
Ho MORAMORA KOKOA ny mikarakara fampanambadiana ankizy any Bangladesy noho ity fahabangana ity. #LeveltheLaw
Narovan'i Sheikh Hasina, Praiminisitra ao Bangladesh, ilay andinin-dalàna vaovao tamin'ny tsikera avy amin'ireo vondrona isan-karazany mpiaro zo, anisan'izany ny Human Rights Watch, izay nitsara izany ho dingana lehibe mihemotra . Nolazainy tao amin'ny parlemanta fa lavitry ny tena zava-misy marina ireny fanakianana ireny.
Narafitra avy amin'ny fandraisana anaty kajy ny zavamisy tena iainana eny amin'ny fiarahamonina ity lalàna ity. Ireo izay mitsikera dia tsy mahalala ny soatoavin'ny fianakaviana sy ny olan'ny ankizivavy any amin'ny faritra ambanivohitra. Miresaka ny fipetrahana an-drenivohitra izy ireo. Ny fiarahamonina an-tanàndehibe ihany no nosainin-dry zareo.
Noferanay ho 18 taona no farany ambany ahafahan'ny zazavavy manambady. Saingy ahoana raha misy amin'izy ireo bevohoka amin'ny faha 12-13 na 14-15 taonany, nefa tsy afaka hanala zaza? Inona no hanjò ilay zazakely? Hanaiky izany ve ny fiarahamonina?
Mbola fady ao Bangladesy izay ny Silamo no betsaka any ny firaisana ara-nofo tsy misy fanambadiana.
Tao amin'ny lahatsoratra ao amin'ny Facebook, nanontanian'i Ashraf Mahmud, mpitoraka bilaogy sady poeta, izay dikan'ny hoe “tombontsoan'ny zaza tsy ampy taona” ao anatin'ilay lalàna:
Tamin'ny nanaovanareo ilay andinin-dalàna manokana hoe afaka manambady alohan'ny faha-18 taonany ny ankizivavy miaraka amin'ny fankatoavan'ny ray aman-dreniny, odianareo tsy fanatra fa maro ny ray aman-dreny mihevitra fa andraikitra ny zanany. Maro ny ankizivavy no teren'ny ray aman-dreniny amin'ny fanambadiana amboarina, tsy misy fankatoavany na safidiny. Tsy nohajainareo ny hajan'ny ankizivavy ary notsinontsinoavinareo ny zon'izy ireo tamin'ny nanaovanareo ho ara-dalàna ny fankatoavan'ny ray aman-dreny ny fanambadiana amin'ny tranga manokana.
Nanamarika i Tuhin Das :
Hatramin'izao, any ambanin'ny laharana misy ireo firenena hafa any Azia Atsimo no misy an'i Bangladesy amin'ny resaka fanambadian'ny ankizy. Mbola hanosika an'i Bangladesy ho ambany lavitra kokoa ity fanitsiana ny lalàn'ny fanambadian'ny ankizy ity. Amin'ny tranga manokana (vohoka vokatry ny fanolanana) na dia vao 14 taona aza ny ankizivavy dia afaka manambady miaraka amin'ny fankatoavan'ny ray aman-dreny […] Hoterena hanambady ny mpanolana azy ireo niharan'ny fanolanana, teren'ity antsoina hoe fiarahamonina ity.
Nahamarika tsy fahatomombanana vitsivitsy ao amin'ilay andinin-dalàna i Syed Ishtiaque Reza mpanao gazety :
Iharan'ny herisetra an-dalambe na herisetra ara-nofo hafa ireo ankizivavy manerana an'i Bangladesy ary matahotra ny hamela azy ireo hivoaka ny ray aman-dreny. Ny fanontaniana dia hoe, hanosika ny ray aman-drenin'ireo niharan'ny herisetra an-dalam-be handamina ny fanambadiany mialoha, amin'ny alalan'ny fanararaotana ireo fahabangana ao aminy ve ilay andinin-dalàna? Rehefa ilaina ny fampiononana sy fandrisihana ireo niharan'ny herisetra an-dalam-be na ara-nofo, raha ampanambadiana aloha loatra izy ireo, ahoana ny ahatrarantsika ny miralenta?
Na izany aza, maro no nanohana ny praiminisitra. Manazava ny fomba hiarovan'ny lalàna ireo ankizivavy i Asha Naznin:
Hanome fialofana ho an'ny zazavavy teratany ao Bangladesy bevohoka alohan'ny fanambadiana ve ianareo? Tsy hanome ianareo. Ho tianareo ve ny zanany ary tsy hanonona ny teny hoe “zazasary” ianareo? Tsia, tsy hanao izany ianareo. Noho izany, “tsy afaka hampanambady ankizivavy alohan'ny faha-18 taonany ianareo”, afaka ampiharina amiko sy aminareo, olona an-tanàndehibe izany karazana fiteny. Fa rehefa manana olana amin'ny zanany vavy mitondra vohoka tsy niriana ny fianakaviana mahantra mipetraka ao amin'ny vohitra iray, izaho sy ianareo tsy ho eo hamaha izany na hamonjy azy ireo. Ity lalàna ity no hiaro azy ireo.
Nidera ny dingana nataon'ny fitondrana ihany koa i Kamruzzaman Kamrul:
Tsy afaka hahatakatra ny tena zava-misy marina ianao izay mipetraka tanteraa aty amin'ny renivohitra. Mora foana ho an'ny fiarahamonina sivily ny mahita ny fanambadian'ny ankizy, fa jamba izy eo anolohan'ny antony mahatonga izany. Rehefa misy fampandrosoana ao amin'ny fiarahamonina, fandriampahalemana sosialy azo antoka, mitombo ny tahan'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra, hihena ny fanambadian'ny ankizy. Mila fotoana isika ho an'izany.
Ny toetry ny fanambadian'ny ankizy any Bangladesy
Nandritry ny fihaonana an-tampony ho an'ny ankizivavy tany Angletera tamin'ny 2014, nampanantena ny piraiminisitra Sheikh Hasina fa hamarana ny fanambadian'ny ankizy latsaky ny 15 taona any Bangladesy alohan'ny taona 2021, ary hamarana ny fanambadian'ny ankizy latsaky ny 18 taona alohan'ny taona 2041.
Araka ny fanadihadiana ny isan'ny mponina sy ny fahasalamana tamin'ny 2007, 15 taona sy telo volana ny salan-taonan'ny fanambadiana ho an'ny vehivavy any Bangladesy. Ao anatin'ny vondronà vehivavy 20-24 taona, nanambady talohan'ny faha 18 taona ny 66%. 68% io isanjato io tamin'ny 2004.
Ny tsindrim-piarahamonina no tena anton'ny fanambadian'ny ankizy any Bangladesy. Tsarain'ny ray aman-dreny ho toy ny andraikitra ny ankizivavy, maro araka izany no tsy mahazo ny tena fanabeazana. Heverin’ izy ireo fa ho tonga vesatra ho azy ny ankizivavy rehefa mahazo taona izy ireo, ary ny lanonan'ny fanambadiana sy ny fanomezana omena ny mpanambady dia lafo kokoa (fanamarihan'ny mpandika: ny fianakavian'ny vavy indray any an-toerana no manome vola ny fianakavian'ny lahy rehefa fanambadiana no resahana), izay tsy ho takatr'izy ireo, noho izany tian'izy ireo alefa manambady ny zanany vavy raha vao misy ahafahany manao izany.
Araka ny fitspankevitra nataon'ny governemanta, maherin'ny antsasaky ny fanambadian'ny ankizy any Bangladesy dia mitranga noho ny fisisihan'ny ray aman-dreny.
Hazavain'ity fanadihadiana avy amin'ny Human Rights Watch ity ireo loza atrehan'ny ankizivavy vokatry ny fanambadian'ny ankizy.
Nahitàna fandrosoana azo tsapain-tanana i Bangladesy tato anatin'ny folo taona lasa, indrindra fa eo amin'ny resaka fampandrosoana ny vehivavy. I Bangladesh no firenena voalohany tany Azia Atsimo nahatratra ny fitovian'ny lahy sy ny vavy any amin'ny fanabeazana fototra. Nidina be mihoatra ny 66% ny tahan'ny fahafatesan'ny reny nandritra ny roa taona farany tany Bangladesy. Ny zavamisy hoe mbola ambony be ny tahan'ny fanambadian'ny ankizy , na eo aza izany zava-bita izany, no mampalahelo, ary fanontaniana iray tokony ho valiana.